Mpanamboatra sy mpamatsy System Focushape Slimming System | MENOBeauty
Mekanika roller volo cavitation RF teknolojia miaraka amin'ny infrared
Ny tsara indrindra ho an'ny fanorana amin'ny vatana, ny tavy burnig, ny lalan-dra amin'ny lymphatic
Fitsipika momba ny fitaovana
Ny fitambarana tonga lafatra amin'ny radio matetika, onjam-peo mahery sy roller ara-mekanika ary ny gadona NC amin'ny tsindry ratsy, dia ataovy ho faran'ny endrik'ireo fitaovana mampihena.
● Teknolojia RF
Ny fahita matetika amin'ny radio (RF) dia manondro ny onja elektromagnetika izay azo ampitaina ary azo alefa, izay antsoina hoe RF amin'ny teny anglisy. Ny hafanana endogenous dia miteraka fihenam-bidy eo noho eo amin'ny fibre collagen dermal ary manentana ny famoahana collagen vaovao vaovao. Ny angovo dia miteraka fiakaran'ny maripanan'ny dermal, mampitombo ny tahan'ny fikorianan'ny oxygen ao amin'ny vatana, manatsara ny fivezivezen'ny rà sy ny lymph, mampihetsika ny metabolisma, manala ary manalefaka ny fandaminana sela.
●Matsilo maheryteknolojia cavitation tic
Ny haitao mahery vaika mampihetsi-po dia mandefa angovo tsy mampidi-doza amin'ny alàlan'ny onjam-peo mahery vaika sy ny hery amin'ny faritra samihafa amin'ny tavy adipose amin'ny alàlan'ny fifamatorana fifandraisana, amin'ny fitsipiky ny rongony akustika mahery ary mampiasa ny angovo ateraky ny cavitation hanapotehana ireo sela matavy amin'ny tavy matavy patolojika .
●Roller mekanika mandehandeha
Roller mekanika marokoroko, afa-tsy toy ny electrodes amin'ny famoahana ny angovo RF, afaka mihodina ihany koa ilay sela misy olana mandritra ny fizotran'ny fitsaboana, dia mitovy amin'ny fahatsapana ny fomba nentim-paharazana nanosika ny tavy tamin'ny tanana. Izy io dia afaka manafaingana ny fivezivezena mandalo an'ilay faritra mahazo ny fitsaboana, manafaingana ny fivezivezin'ny tsiranoka amin'ny vatana ary mampidina detoxication. Malemy ny cellulite lehibe ary mihombo ny famotehana amin'ny fihodinana. Ankoatr'izay, ny fihodinana dia afaka manampy amin'ny fanafainganana ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny tavin'ny volomboasary.
● CNC gadona nbe fikajiana tsindry TECHNOLOGY
●Teknolojia Laser malefaka 905
LASER, amin'ny teny anglisy - LASER, ny transliteration no LASER. 905nm ny halavan'ny laser semiconductor manokana dia afaka manatsara ny tsiranoka misy eo amin'ny hoditra sy ny sela hozatra, mandrisika ny fihetsiketsehana eo anelanelan'ny sela, mampihetsika ny sela ary manatsara ny fahamendrehan'ny hoditra. Mandritra izany fotoana izany dia manafaingana ny fivezivezan'ny rà misy lalan-drà tsy azo jerena izy io, ary manapoizina poizina be loatra amin'ny alàlan'ny rafitry ny lymphatic, ary afaka mamaha ny lokon'ny tarehy izy ary mamoaka amin'ny alàlan'ny fanamoriana hazavana 905nm.
Teo aloha: ABS 3D HIFU
Manaraka: Q0 Slim Vacuum Roller + Cavitaton + RF + Jiro tsy misy fangarony
Mifou fivaviana azo entina
Fitsaboana Portable Tescar CET RET RF miaraka amin'ny vacuum ...
Milina fanorana manala vatana